Gudeelcha akka sabaatti nurra kaahamu, akka sabaatti of irraa darbanna! |
Gudeelcha akka sabaatti nurra kaahamu, akka sabaatti of irraa darbanna!
Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa
Finfinnee, Oromiyaa, Waxabajji 10,2020
Seenaa biyya kanaa keessatti bu’uura ijaarsa sirna Impaayera Itoophiyaarraa kaasee sabni Oromoo akka sabaatti kabajaa argatee jiraatee hin beeku. Mootonni Habashaa bara dhufaa darbaa aangoo wal jijjiiranii Impaayera kana bulchan tarsiimoo ittiin Oromoo cabsaniifi biyya isaa dhuunfatan baafatanii uummata Oromoo kana irratti lola geggeessaa turaniiru. Bu’uura Oromummaa kan ta’an kanneen akka Afaan Oromoo, Aadaa, duudhaaleefi dhugeeffannaa sabichaa balleessuudhaan eenyummaa Oromoo ukaamsuun hojii idilee mootota Habashaa ture. Qabsoofi wareegama sabichi kaffaleen eenyummaan Oromummaa har’a jiraatus, hacuuccaa fi roorroon ammallee uummata keenyarraa hin dhaabbanne. Uummatichis roorroofi hacuuccaa kana ofirraa kaasee bilisummaan jiraachuuf falma isaa geggeessaa turee ammas itti jira.
Qabsoo baroota dheeraa booda waggoottan lamaan darban kana “jijjiiramni siyaasaa biyya kanatti dhufeera” jedhamee abdatames hawwiifi gammachuu yeroo muraasaa qofa ta’ee hafee. Sirni mootummaa EPRDF keessoo isaatti haaromsa godhee gaaffii sabootaa deebisuuf waadaa galus, waadaan uummataaf seename sun jijjiiramee faallaa isaatiin roorroon hammaachaa deemeera. Abdiin uummanni “gaaffiinkoo naaf deebi’a” jedhee eeggates hafee mootummaan maqaa jijjiirratee “ofin haaromse” jedhe mirga sabootaa hacuucee lubbuun jiraachuu ilma namaayyu gaaffii keessa galche. Addatti ammoo sabni Oromoo kan duraa caalaatti ajjeefamaa, qe’eerraa buqqa’aa, hidhamaa itti fufeera.
Maqaa of haaromsuutiin qabsoo saba keenya Oromoo gufachiisuu irratti irra deddeebiin qoodi sirna EPRDF fudhate xiqqaa hinturre. Hadiiduma mootolee abbaa irree saba keenya irratti wal jijjiiraa adeeman roorroof hiraarsaan saba keenya irra gahu akkaan dabalaa adeeme.
Abdiif abjuun ‘nagaan uummataa nii deebi’a’ jedhamee qaamota hedduun abdatames Qirixii bishaan bu’e ta’ee hafuun, waraanaaf caasaan mootummaa sabboontota ilmaan Oromoo hidhuu, ajjeesuu qaama hir’isuutti fuulleeffatee dalagaa isaa duraa saffisaan itti fufe. Roorroo hammeenyaa waggoottan 28 dura nurra gahaa turee olitti nurraan gahaas jira. Kun ammoo obsaaf tasgabbii uummata keenyaa laachuurra darbee jiraachuu cimsinee hubanna.
Yakki saba keenya irratti qaama mootummaan raawwatu murteef galtee seeraa dhabuun daran mootummichi uummata keenya akka cunqursu taasise. Ajjeechaan waraanaaf qaama mootummaan ilmaan Oromoo irra gahuuf gaafatamni dhibuun daangaa yakkaa kaa’uu dadhabe, daranuu waraanaaf qaamoleen mootummaa fuulleffannoon uummata daguuguutti akka ce’an taasise. Kana irra darbee akka mootummaan nama ajjeesuuf mirga qabuutti ilaalame. Kun ammoo akka mootummaan mana waliin ajjeesee gubuu, guyyaa cidhaatti misirroowwan ajjeesuu, ulfa ajjeesuu, obbolaa lamaan wal faana ajjeesuu, daa’imman irraa haadha ajjeesuu fi abbaaf haadha manaa tokko keessatti wal cinatti ajjeesee yakka itti fufiinsaa raawwatu taasise.
Haala kanaan ajjeechaawwan suukanneessaan: bakkaaf guyyaan itti Oromiyaa golee garaagaraa keessatti raawwatan gabaabinaan kaahuu nii danda’ama.
Gurraandhala 12,2019 misirroo gaafa cidha isaanii waayiillan isaanii Waliin kibba Oromiyaa Boorana Hiddii Lolaatti waraanni mootummaa ajjeese. Kibba Oromiyaa Gujii keessatti daa’ima waggaa 10 waraana mootummaa mana waliin gube. Kana malees Bunaaf qabeenya uummata mancaasuudhaan hawwaasa keenya iyyuma hamaaf gidiraa ulfaataaf qaamoleen mootummaa saaxilanii jiru. Manneen gubachuu, Loon horsiise bulaa Oromoo saamuunis Kibba Oromiyaatti akka malee babal’atee jira. Uummata jumulaan hidhuunis onicha keessatti hedduminaan adeemaa kan jirudha.
Obbolaan wal faana bakka tokkotti kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti rasaasaa waraana mootummaan ajjeefamaniiru. Godina wallagga Lixaa Aanaa Najjoo ganda Buuyyaa Bollii jedhamutti obbolaa lama Gurraandhala 1,2020 waraana mootummaan ajjeefaman. Wallagga Lixaa Ona Boojjii Coqorsaa araddaa Sibuu Dheebichaa jedhamu keessattis obbolaan lamaan, Eebla 22,2020 wal faana rasaasaa waraana mootummaan ajjeefaman. Qellem Wallaggaa ona Anfilloo Araddaa Dollaatti Gurraandhala 18,2020 wal cinatti obbolaan ajjeefamaniiru. Wallagga Bahaa ona Ebentuu keessattis obbolaan Lamaan bobaa abbaa jalatti rasaasa Kora Bittinneessaa Oromiyaan ajjeefaman.
Torban dabarsaa jirru kana keessa abbaaf haati sababa “ilmi keessan WBO dha” jedhuun mana isaaniitti itti seenamee waraana mootummaan ajjeefamaniiru. Yakki jallinaa akkanaa uummata keenya irratti wayiita adeemaa jirutti uummati keenyas itti siqeenyaan waan Oromummaa isaaf irra gahaa jiru mara hordofee of irraa qolachuu akka qabu dhaamna.
Ulfi fi maanguddootnis kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ajjeefamaa turan itti fufees jira. Dhiyeenya kana ammoo Baha Oromiyaa Hararge keessatti maatii isaa irraa qabanii manaa baasanii erga ajjeesanii reeffa gatanii Waraabeessa nyaachisan. Kaaba Shaggar keessatti ammoo dhiyeenyuma jalqaba ija jaamsanii, qaama saalaa isaa muranii dhuma irra ajjeesanii gatan.
Namoota hidhanii mana hiraarsaatii baasanii morma kutanii ajjeesuu, mana hidhaatii baasanii ajjeesanii bakkeetti gatuunis Oromiyaa kutaalee hedduu keessatti raawwataa jira. Kaaba Oromiyaa Walloo keessattis uummata keenya Oromootti roorrisuun daangaa darbee jira. Roorroo hamtuu kana keessatti qaqqaaliiwwan sabaa onoota Walloo keessaa qabanii mana hiraarsaatti darbataniiru. Giddu gala Oromiyaatti hawwaasa keenya Oromoo lafa isaa irraa buqqaasaa jiran. Qabiyyee lafaa isaa irraa fudhatanii akka uummati godaanu taasisaa jiru. Kun roorroo daangaa hinqabne ta’uu uummata keenyaafis himna.
Jimma keessattis ajjeechaawwan sukeessoon baruma kana qaama mootummaan raawwataa jiru. Uummata akka hinojjetanne, akka hinqotanne taasisuu fi roorrisa hamaadhaan nama nagaa qabanii hidhuunis akkaan babal’atee ona Jimmaa bakkoota garaagaraa keessatti mul’ata. Iluu Abbaa Booraa keessatti mana uummataa gubuu, qabeenya saba Oromoo mancaasuu, ilmaan Oromoo hidhaan hiraarsuuf gidiraa himaamsaan olii qaamni mootummaa raawwataa jira.
Kibba baha Oromiyaa Baalee keessatti guyyaa kaleessaa Waxabajji 9,2020 waraanni mootummaa nama nagaa Konkolaachisaa kan ta’e ajjeesan. Ajjeesuu qofa utuu hintaane, faanaaf haqa nama sanaa balleessuuf yaaliin isaan taasisan baay’ee kan nama mufachiisudha. Kun marti seerri uummata keenyaaf dhaabbatee, qaama irreedhaan dhaadatu kana gaafatu laaffachuu irraati jennee yaadna.
Gama kaaniin abbootii qabeenyaa Oromoo saamuudhaan, mirga hojiif sochii sadarkaa dhorkamurra uummata keenya geessisaa jiran. Kana malees qaamolee dhiittaa mirga namoomaa uummata keenya irra gahu falman doorsisuu fi itti dhaadachuunis cimee mul’ata.
Walii galatti sabni keenya roorroo akkaan saalfachiisaa keessatti kufee jira. Daa’imni isaa utuu hinafin qaamaa hir’achuu, du’uuf hiraarsaaf gochaa hammeenyaa qaama mootummaan irratti raawwatu keessummeessaa jira.
Kunneen hundi roorroo akka sabaatti nutti fe’amee jiru ta’uutti Qeerroon Bilisummaa Oromoo amana. Roorroof roorrisaan ammoo galma gahiinsa qabsoo saba keenyaan kan nurraa dhaabbatudha jenna. Gaaffiin nama dhuunfaa, gaaffiin jaarmiyaalee hawwaasaaf, gaaffiin falmitoota Oromoo marti galma qabsoo bilisummaa keessatti deebii argata jenna akkasidhas. Kanatti daangaa gochuuf uummati keenya marabbaa isaa cimsatee waloon karaa of kabachiisu maraan qabsoo isaa finiinsuu akka qabu Qeerroo Bilisummaa Oromoo gaafata.
Gochaa jallinaa qamooleen mootummaa humnaan bulchuuf uummata irratti raawwatan mara dura dhaabbachuufis of kenniinsaan qabsoo eegalle itti fufiinsaan taasisaa jiraachuu keenya uummataaf ibsina. Nuti Qeerroo Bilisummaa Oromoo yakkaawwan uummata keenya Oromoo irra gahan, keessattu yakka ajjeechaa suukanneessaaf kaan bakka hawwaasi keenya itti ajjeefameef guyyaa isaa waliin ragaa gahaa nama 500 olii of harkaa kan qabnu, falmitoota haqni Oromoo ajjeefaman kanaa akka deebi’uuf mootummaa idil addunyaatti gaafachuu barbaadan maraaf kan laannu ta’uus asumaan ibsina. Qaamoleen yakka ajjeechaa raawwatan seeran gaafatamuu akka qabaniif uummati Oromoo golee Oromiyaa maraaf bakkoota garaagaraa irra jirtan marti gahee eenyummaa keessanii akka bahattan gaafanna. Mootummaan seera waraana cabsuun uummata meesha maleeyyii manatti adeemee ajjeesuu, kunaanuuf hiraarsuun akkaan babal’achuun jiraachuu Oromoo boriif yaaddoo guddaa nutti uumee jira. Dhugaan uummata keenyaa akka ifa bahuuf, falmitootaaf ogeyyiin seeraa miira namummaan gahee isaanii bahachuu akka qaban dhaammanna. Qaamni uummata keenya dararuuf ajjeesu seeraan gaafatamuu akka qabus cimsinee gaafanna.
Qabsoo uummati keenya aarsaa ulfaataa kaffalee fide, humnoota har’a isa ajjeesaa jiran kana ol baasuun nii yaadatama. Humnootiin kun qabsoo Oromoo waggoottan darbe kana gatachiisuu keessatti gahee kan qabaniif humnoota qabsicha gatachiisuu keessatti gahee isaanii bahatan uummati cimsee beeka jennee amanna. Rakkoon waggoottan darban gatachiisa qabsoo bilisummaatti fide Kaayyoof galma qabsoo Bilisummaa ilaalanii warraaquu irra nama dhuunfaa qofa of dura buusanii ilaaluutu rakkoo har’aaf karaa saaqe jennee amanna. Har’as rakkoon sun akka hindhufne sodaa qabna. Nama kamuu haa ta’uu hirmaataa qabsichaa yoo ta’ellee, uummati keenya galma bilisummaaf walabummaa isaa hanga dhugoonfatutti cimee qabsicha yoo itti fufe sodaa qabnu nii fura jennee amanna. Qabsoon saba keenyaa akka baroottan darbanii gufachuu akka hinqabneef, paartileen siyyaasaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromootti amanan galma gahiinsaaf daandii uummati ittiin warraaqu akka akeekuu qaban gaafataa, yeroon kun murteessituu waan taateef dogoggora darbe irraa hubatanii miira hogganummaa isaanii agarsiisuu akka qabanis gaafanna.
Maayii irratti gudeelcha akka sabaatti nurra kaahamu, akka sabaatti of irraa darbanna! Uummati keenya kana hubachuun Warraaqsa eegalee jiru itti fufee, hanga Bilisummaaf Walabummaa biyya isaa mirkaneeffatutti akka itti fufuu gaafataa, nuti Qeerroon Bilisummaa Oromoos waan dandeenyu maraan saba keenya kabachiisuuf of qusannaa malee qabsoo itti seennee jirru hanga galma isaa gahutti itti fufuu keenya ibsina. Gaaffiin saba keenyaa galma Bilisummaa haqaaf, walabummaa biyyaatiin dhugooma. Sabni bilisummaa qabu hiree isaa murteeffachuu danda’a. Kana dhugoomsuuf qabsoon goonu cimee kan itti fufee jiru ta’uu saba keenyaaf himuu feena.
UNINFORMED AND RIDICULOUS CLAIM
By Gutu Olana Wayessa
I do not remember the year, but once the late PM Meles Zenawi compared Ethiopia to Sweden on income inequality. He used the Gini coefficients of the two countries and wanted us to believe that inequality is at comparable levels in Sweden and Ethiopia. I heard him making this comparison and claim a couple of times. Let aside the issues pertaining to the unreliability of the data coming from Ethiopia, for those who lived in the largely egalitarian system of Scandinavian countries and experienced firsthand their equality-enhancing institutional mechanisms, this assertion was unfathomable.
In yesterday’s parliamentary speech, in relation to the COVID-19 pandemic, PM Abiy Ahmed talked of Ethiopia as a country that takes care of its citizens in a better way than European countries and the US. He referred to Sweden as an example in comparing the incommensurable. Let aside the gigantic difference between what it means to be a citizen in Europe on the one hand and in Ethiopia on the other (For a glimpse of the realities on the ground, take a look at the recent report by Amnesty International, titled “Beyond Law Enforcement”: Human Rights Violations by Ethiopian Security Forces in Amhara and Oromia), for somebody who knows the extent of the spread of the disease in many European countries, including Sweden, and the threat it posed to their health system (which is obviously highly developed), his comparison is uninformed and his claim ridiculous and embarrassing!
Previous articleAbbootiin Gadaa Tuulamaa Dhimma Obbo Dinquu irratti maal jedhan?
Next articleMichummaa Isuu fi Abbichuu